Hoteelada Muqdisho qaarkood oo Maanta ah kuwa Mashquul ah iyo Xildhibaano tiro badan oo kusii qul qulaya - iftineducation.com
iftineducation.com – Sida aan Wararka ku heleyno Waxaa Maanta kulamo aan Caadi aheyn qaar kamid ah Hoteelada Magaalada Muqdisho ku madlan Xildhibaano tiro badan oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada ku balansan Hoteelada Magaalada Muqdisho ayaa isku arki doona qaab beel beel ah iyadoona Wararka aan heleyno Sheeayaan in Xildhibaanada Hawiye , Kuwa Daarood kuwa Dir , Digil iyo Mirifle iyo Xildhibaanada .5-ka ay gooni gooni Hoteelada ugu shirayaan qolo walbana Hoteel gaar ah ku balan san yihiin.
Xildhibaanada ayaana ka arinsanaya go’aanka ugu dambeeya ay ka gaarayaan Mooshinka laga soo gudbiyay R/Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Sheyrdoon (Saacid) iyo sida Xal waara looga gaari karo Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha.
Xubnaha Baarlamaanka ee Manata ku shiraya Hoteelada Magaalada Muqdisho ayaa u badan Xildhibaanada taageersan Madaxweynaha Soomaaliya kuwaa oo dadaal badan ku bixinaya sidii uu meesha uga bixi lahaa R/wasaaaraha.
Hoteelada Magaalada Muqdisho iyo Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa maalmahan waxaa si weyn looga dareemayay qul qulka Xildhibaanada Baarlamaanka ee lakala safan Madaxweynaha Soomalaiya iyo R/Wasaaraha waxaana labada dhinac mid walbo ku dadaalayaa in ay ku guuleestaan Loolanla adag ee ka dhaxeeya .
Maalinta Sabtida ah ee soo aadan ayaa la filayaa in Mooshinka R/Wasaaraha si rasmi ah Gudoonka Baarlamaanka gacanta ugu dhigaan waxaana xiligaasi kadib bilaabmaya dooda iyadoona ugu dambeyn Codka Kalsoonida loogu qaadayo R/Wasaare Saacid oo la tilmaamayo in rajadiisa hada ay aad u yar tahay.